गौरीलाई पाउन यो हदसम्म पुगेका थिए शाहरुख खान | Lifemandu
| बुधबार, २१ चैत, २०७४
शाहरुखको ‘लबस्टोरी’ बाट कोहि पनि मानिस अनभिज्ञ छैनन् । कसरी उनले गौरीलाई पाउनको लागि अनेक काण्ड मच्चाएका थिए ? उनी गौरीको निकै नै दीवाना थिए । उनी गौरीलाई निकै प्रेम गर्थे । यति मात्र होइन गौरीले छोटो कपडा लगाएको समेत उनलाई मन पर्दैन थियो । शाहरुखलाई गौरीलाई बिहे गर्नु भनेको कुनै युद्ध जित्नु जस्तै थियो ।
गौरी हिन्दु–पञ्जाी परिवारकी थिइन् भने शाहरुख खान मुस्लिम परिवारका । गौरीको परिवार उनीहरुको सम्बन्धबाट कत्ति पनि खुशी थिएनन् । भनिन्छ शाहरुख गौरीको पछाििड लागेर मुम्बईसम्म पुगेका थिए ।
गौरीलाई पाउनको लागि निकै पापड बेलेका थिए । उनले गौरीको लागि रातभर रेलवे स्टेशनमा समेत सुतेका थिए । र, अन्त्यमा यी दुइको बिहे भयो अहिले शाहरुख खान दुनियाँमा राज गर्न सफल भइरहेका छन् ।
अन्य अभिनेत्रीसँगको यस्तो हरकत
‘डिम्पल क्विन’ प्रिती जिन्टाको गालाको डिम्पल शाहरुख खानलाई निकै मन पथ्र्यो । एकपटक कुनै कामको शिलशिलामा शाहरुख खान प्रिती जिन्टासँग थिए । र उनले प्रितीको गालमा समाए । जुन कुरा थाहा पाएर गौरीले सलमानलाई झापड मात्र हानिनन् शाहरुखसँग निकै भड्किएकी पनि थिइन् । त्यसपछि उनले कुनै अभिनेत्रीलाई छुने आँट गरेनन् ।
फिल्म ‘डन’ को समयमा प्रियंका चोपडा र शाहरुख खानको बीचको दुरी घट्दै गएको र यो कुरा गौरीको कानसम्म पुगेपछि उनी रिसले आगो भइन् तर शाहरुखले प्रियंकासँगको दुरी निकै बढाए ।
अहिले शाहरुख आफ्नी श्रीमती र बच्चाहरुसँग निकै सुखी जीवन विताइरहेका छन् ।
किन चिसियो शाहरुख र करणको सम्वन्ध ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता शाहरुख खान र निर्देशक करण जौहरबीचको गहिरो मित्रताबारे कसलाई थाहा नहोला ? तर अब उनीहरुको मित्रतामा दरार आएको बताइन्छ ।
किन एक अर्काको अनुहार हेर्न चाहादैनन् शाहरुख र प्रियंका ?
एजेन्सी । बलिउडमा निकै चर्चित अभिनेता शाहरुख खान र हलिृडमा समेत काम गरिसकेकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पछिल्लो केर्ही वर्ष देखि एक अर्कालाई पटक्कै मन पराउँदैनन् ।